သင့်ဘ၀ကို သိသာစွာ ပြောင်းလဲတိုးတက်စေနိုင်မည့် အလေ့အကျင့်(၇)ခု – Gentleman Magazine
လူတစ်ယောက်ရဲ့ တိုးတက်မှု၊ ဆုတ်ယုတ်မှုဆိုတာတွေဟာ အချိန်ကို ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲလဲဆိုတာပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ တစ်နေ့တာကို ဖြတ်သန်းရာမှာ မရေမတွက်နိုင်လောက်တဲ့ စိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စရာတွေ၊ အာရုံလွင့်ပျံစရာတွေ အများကြီးရှိပေမယ့် အလုပ်ကို ဦးစားပေးတတ်သူတွေကတော့ အောင်မြင်မှုဆီကို ပိုပိုပြီး နီးစပ်အောင် သွားနိုင်ကြပါတယ်။ အောင်မြင်မှုဆီသို့ သွားရာလမ်းမှာ သင့်ဘ၀ကို သိသိသာသာတိုးတက်ပြောင်းလဲစေနိုင်မယ့် အလေ့အကျင့်လေးတွေ ရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုအလေ့အကျင့်တွေထဲက တစ်ချို့ကတော့….
ပြက္ခဒိန်ကကြည့်ပြီး လုပ်စရာတွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု လုပ်နေတာက ဘာမှအဓိပ္ပါယ်မရှိသလို ခံစားရလာစေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုခံစားချက်မျိုး မရှိလာနိုင်တဲ့အပြင် အခက်အခဲတွေ အားလုံးက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အကောင်းမြင်စိတ်ရဲ့ အခြားကောင်းကျိုးတွေကိုလည်း ခံစားရမှာပါ။
ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်အောင် စားသောက်ပါ။
လူအများစုက ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကို ဂရုမစိုက်တတ်ကြပါဘူး။ အခုခေတ်လို စိတ်ဖိစီးမှုများပြားလှတဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုမှာ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဘယ်လိုနာမကျန်းမှုကိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကာကွယ်ထားနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေကို တတ်နိုင်သမျှ များများသုံးဆောင်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့ပဲ လေ့ကျင့်ခန်း စလုပ်လိုက်ပါ။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တာတွေ စားသောက်နေရုံနဲ့ မလုံလောက်သေးပါဘူး။ ထိပ်ဆုံးအောင်မြင်မှုဆီကို ရောက်ရှိဖို့အတွက် ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်နေဖို့ရာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေက ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမက စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကောင်းကျိုးတွေကိုပါ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ရရှိဖို့ အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့အရာက တစ်ခုပဲ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ပျင်းရိမှုပါ။
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီး အပြန်အလှန်အလွယ်တကူဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းရဲ့ ပြဿနာတစ်ခုကတော့ သတင်းအချက်အလက်တွေ အများကြီးကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ ရရှိနေတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့အားလုံးကို တိုက်ရိုက်သော်လည်ကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း စိုးရိမ်သောကရောက်စေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားစစ်ဖြစ်မယ့်ကိစ္စကို စိုးရိမ်နေလို့လည်း ကျွန်တော်တို့ ထိန်းချုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ။ ထိန်းချုပ်လို့ မရနိုင်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက် စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် အလကားစွမ်းအင်ဖြုန်းတီးရာ ရောက်ပါတယ်။
၂၀ ရာစုနှစ်လူငယ်တွေက အလုပ်ကြိုးစားဖို့ထက် အလုပ်ကို ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ လုပ်ဖို့အယူအဆကို ပိုမိုလက်ခံထားကြပါတယ်။ ဒီအယူအဆက မှန်သလိုရှိပေမယ့် တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ ဘယ်လောက်ပဲ ထက်မြက်ပါးနပ်ပါစေ အလုပ်မကြိုးစားရင် အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ပါးပါးနပ်နပ်အလုပ်လုပ်တာက အလုပ်ကို လွယ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပေမယ့် မကြိုးစားဘူးဆိုရင်တော့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကို ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
မလိုအပ်တဲ့ စိုးရိမ်သောကတွေ၊ စိတ်ဖိစီးမှုတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာ ရယ်မောပျော်ရွှင်ဖို့ကိုတောင်မှ မေ့လျော့နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားစေဖို့အတွက် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရယ်မောပျော်ရွှင်သွားစေနိုင်မယ့် အချိန်တွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။
ကောင်းကောင်းအိပ်စက်ခြင်းရဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ အများကြီးပါပဲ။ အခုလို ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့ အခြားအခြားသော မီဒီယာတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့အချိန်မှာ အိပ်ချိန်တွေ လျော့နည်းလာကြပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အိပ်ချိန်ကို ဂရုစိုက်ပါ။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး ယောင်္ကျားလေးတိုင်း အားကျစေမည့်
သငျ့ဘဝကို သိသာစှာ ပွောငျးလဲတိုးတကျစနေိုငျမညျ့ အလအေ့ကငျြ့(၇)ခု
လူတဈယောကျရဲ့ တိုးတကျမှု၊ ဆုတျယုတျမှုဆိုတာတှဟော အခြိနျကို ဘယျလိုစီမံခနျ့ခှဲလဲဆိုတာပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ တဈနတေ့ာကို ဖွတျသနျးရာမှာ မရမေတှကျနိုငျလောကျတဲ့ စိတျအနှောကျယှကျဖွဈစရာတှေ၊ အာရုံလှငျ့ပြံစရာတှေ အမြားကွီးရှိပမေယျ့ အလုပျကို ဦးစားပေးတတျသူတှကေတော့ အောငျမွငျမှုဆီကို ပိုပိုပွီး နီးစပျအောငျ သှားနိုငျကွပါတယျ။ အောငျမွငျမှုဆီသို့ သှားရာလမျးမှာ သငျ့ဘဝကို သိသိသာသာတိုးတကျပွောငျးလဲစနေိုငျမယျ့ အလအေ့ကငျြ့လေးတှေ ရှိဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒီလိုအလအေ့ကငျြ့တှထေဲက တဈခြို့ကတော့….
ပွက်ခဒိနျကကွညျ့ပွီး လုပျစရာတှကေို တဈခုပွီးတဈခု လုပျနတောက ဘာမှအဓိပ်ပါယျမရှိသလို ခံစားရလာစပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အကောငျးမွငျစိတျနဲ့ စဉျးစားတတျမယျဆိုရငျတော့ ဒီလိုခံစားခကျြမြိုး မရှိလာနိုငျတဲ့အပွငျ အခကျအခဲတှေ အားလုံးက စိတျဝငျစားစရာကောငျးလာမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ အကောငျးမွငျစိတျရဲ့ အခွားကောငျးကြိုးတှကေိုလညျး ခံစားရမှာပါ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျအောငျ စားသောကျပါ။
လူအမြားစုက ခန်ဓာကိုယျကနျြးမာရေးကို ဂရုမစိုကျတတျကွပါဘူး။ အခုခတျေလို စိတျဖိစီးမှုမြားပွားလှတဲ့ ဘဝနထေိုငျမှုမှာ စိတျရောကိုယျပါ ပငျပနျးနှမျးနယျကွရပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ဘယျလိုနာမကနျြးမှုကိုပဲဖွဈဖွဈ ကာကှယျထားနိုငျဖို့ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ အစားအသောကျတှကေို တတျနိုငျသမြှ မြားမြားသုံးဆောငျပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီနပေဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျး စလုပျလိုကျပါ။
ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတာတှေ စားသောကျနရေုံနဲ့ မလုံလောကျသေးပါဘူး။ ထိပျဆုံးအောငျမွငျမှုဆီကို ရောကျရှိဖို့အတှကျ ခန်ဓာကိုယျကွံ့ခိုငျနဖေို့ရာ ကိုယျလကျလှုပျရှား လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။ ကိုယျလကျလကေ့ငျြ့ခနျးတှကေ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာသာမက စိတျဓာတျပိုငျးဆိုငျရာ ကောငျးကြိုးတှကေိုပါ ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ ခန်ဓာကိုယျရရှိဖို့ အဟနျ့အတားဖွဈစတေဲ့အရာက တဈခုပဲ ရှိပါတယျ။ အဲ့ဒါကတော့ ပငျြးရိမှုပါ။
ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျပွီး အပွနျအလှနျအလှယျတကူဆကျသှယျနိုငျခွငျးရဲ့ ပွဿနာတဈခုကတော့ သတငျးအခကျြအလကျတှေ အမြားကွီးကို အခြိနျနဲ့တဈပွေးညီ ရရှိနတောကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးကို တိုကျရိုကျသျောလညျကောငျး၊ သှယျဝိုကျ၍သျောလညျးကောငျး စိုးရိမျသောကရောကျစတောပဲဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျနဲ့ မွောကျကိုရီးယားစဈဖွဈမယျ့ကိစ်စကို စိုးရိမျနလေို့လညျး ကြှနျတျောတို့ ထိနျးခြုပျလို့ မရပါဘူး။ ဒီလိုပါပဲ။ ထိနျးခြုပျလို့ မရနိုငျတဲ့ကိစ်စတှအေတှကျ စိုးရိမျနမေယျဆိုရငျ အလကားစှမျးအငျဖွုနျးတီးရာ ရောကျပါတယျ။
၂၀ ရာစုနှဈလူငယျတှကေ အလုပျကွိုးစားဖို့ထကျ အလုပျကို ထကျထကျမွကျမွကျနဲ့ လုပျဖို့အယူအဆကို ပိုမိုလကျခံထားကွပါတယျ။ ဒီအယူအဆက မှနျသလိုရှိပမေယျ့ တကယျလကျတှမှေ့ာတော့ ဘယျလောကျပဲ ထကျမွကျပါးနပျပါစေ အလုပျမကွိုးစားရငျ အဆငျမပွနေိုငျပါဘူး။ ပါးပါးနပျနပျအလုပျလုပျတာက အလုပျကို လှယျအောငျလုပျပေးနိုငျပမေယျ့ မကွိုးစားဘူးဆိုရငျတော့ ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကို ရောကျမှာမဟုတျပါဘူး။
မလိုအပျတဲ့ စိုးရိမျသောကတှေ၊ စိတျဖိစီးမှုတှနေဲ့ ပွညျ့နတေဲ့ အခြိနျမှာ ရယျမောပြျောရှငျဖို့ကိုတောငျမှ မလြေ့ော့နတေတျကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျကိုပေါ့ပါးလနျးဆနျးသှားစဖေို့အတှကျ လှတျလှတျလပျလပျ ရယျမောပြျောရှငျသှားစနေိုငျမယျ့ အခြိနျတှလေညျး လိုအပျပါတယျ။
ကောငျးကောငျးအိပျစကျခွငျးရဲ့ အကြိုးကြေးဇူးတှကေတော့ အမြားကွီးပါပဲ။ အခုလို ဆိုရှယျမီဒီယာတှနေဲ့ အခွားအခွားသော မီဒီယာတှလှေမျးမိုးနတေဲ့အခြိနျမှာ အိပျခြိနျတှေ လြော့နညျးလာကွပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ အိပျခြိနျကို ဂရုစိုကျပါ။
Previous: သင့် ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင်မသိနိုင်သေးတဲ့ အချက်များ
Next: ဘ၀မှာ လိုအပ်တဲ့ လူ(၃)မျိုး